STRAWBERRY "KAMA": SHARAX, SAWIR, BEERID IYO DARYEEL EE KALA DUWAN - STRAWBERRIES
Noocyada beeritaanka ee strawberries noocyo "Kama"
Strawberry "Kama" ayaa muddo dheer ku guuleystay qalbiyada beerta oo dhan sababtoo ah bislaan deg deg ah, dhadhanka macaan iyo dhadhanka cawska. Sida noocyada kala duwan, waxay leedahay faa'iidooyin iyo faa'iido daro. Tixgeli iyaga si faahfaahsan.
Kala duwanaanta noocaas ah waxaa lagu barbaariyay jiliciyeyaasha Polish waxayna noqdeen kuwo baahsan oo ay ugu wacan tahay iyada oo aan qabyo ahayn, Bisaylkiisa oo deg deg ah iyo dabeecado dhadhan fiican leh. Sidaa darteed, aan ogaanno sharaxaada noocyada kala duwan ee strawberries "Kama".
Buundada dufanka "Kama" ee heer dhexdhexaad ah, waxay u koraan si aad u xaddidan, marka loo eego noocyada kala duwan ee ka duwan kuwa kale. Caleemuhu waa yar yihiin, waxay leeyihiin cagaar cagaaran oo madow, si xooggan hoos loogu soo koobo. Under caleemaha yihiin caws ubax, taas oo ka dib markii waqti cayiman noqdaan berry. Sababo la xiriira nidaamkan, miro ayaa mar walba la ilaaliyaa oo laga xiraa shimbiraha.
Miraha strawberries dhalaalaya casaan, miisaanka hal berri waa celcelis ahaan 20 g. Hayso qaab muuqaal ah, wax yar oo ribbed ah. Abuurka miraha waxay ku yaalliin meel qoyan. Dhadhanka waa macaan oo hodan ah, carafku waa wax fiican, oo leh qoraallada strawberry. The berry soo ururiyey ee goosashada ugu horeysay waa badanaa ka weyn kuwa kale.
Akhriso sharaxaada iyo sifooyinka kala duwan ee noocyada qudaarta: "Albion", "Gigantella", "Queen Elizabeth", "Elizabeth 2", "Masha", "Ruushka", "Rabbi", "Marshal", "Aasiya", "Malvina" "Alba", "Kimberly", "Zeng Zengana", "Fresco", "Chamora Turusi", "Queen", "Maxim", "Eliana", "Clery", "Honey", "Mara de Bois" "Crown".
Kala duwan ee strawberry "Kama" waxaa lagu gartaa mudo gaaban oo hore ah. Beergooyinku marwalba way sarreeyaan, qiyaastii 1 kg oo berri ah ayaa laga goyn karaa hal baadiyaha, iyo qiyaastii 12 tan oo hal hektar ah. Dalagyada ugu horreeya ee ka soo baxa strawberry ayaa la goostay dhammaadka May, sidoo kale waxay soo saartaa miro bil gudaheed. Haddii aad korto noocyada kala duwan ee xaaladaha aqalka dhirta, ka dibna dhexda dhexe ee guga filanayo fruiting.
Strawberry "Kama" ku filan adkaysi u cudurada fangas kala duwan, ma ka baqayaan saamaynta kalluunka casaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa habboon in la ilaaliyo cayayaanka strawberry iyo caarada; waa mid aad u nugul cayayaanka.
Beerta laga samaysto "strawberries" "Kama" kama duwana beerashada noocyo kale. Si taxadar leh u raac shuruudaha lagama maarmaanka ah, ka dibna waxaad helaysaa goosashada wanaagsan iyo mid hodan
Ma taqaanaa? Haddii aad xanuun dareento, cun cun qufac shiilan. Waxay ka kooban tahay walxaha kudhaca walxaha la yiraahdo aspirin si fiican loo yaqaan..
Si loo doorto geedo tayo leh oo kala duwan, fiiri qodobbada soo socda:
Caleemaha waa inay ahaadaan midab cagaaran oo leh caaro dhalaal ah iyo pubescence yar.
Geesku waa inuu lahaadaa dhumucda ugu yaraan 0.7cm.Dhagaajaduna waa, ka sii fiicnaanshaha iyo korodhka dhalidda ayaa noqon doonta.
Dhererka ah ee xididdada geedo leh rhizome furan waa in ay ahaadaan ugu yaraan 7 cm. Haddii geedo ku jira dheri, ka dibna xididdadiisa waa in ay hareeraan mugga oo dhan weelkan.
Cagaarka beeraha "Kama" wuxuu u kori karaa si madaxbannaan. Si arrintan loo sameeyo, dooran shaar ka mid ah duurka uterine ee sanadka ugu horeeya ee horumarka, taas oo aan ka badnayn 3-4. Xaaladdan, antennae waxay noqon doontaa labadaba balaadhan oo aad u ballaaran, waxayna ku sii fiicnaan doonaan dhulka.
Goobta iyo wakhtiga qulqulka
Xeebeedka cawska ayaa la samayn karaa labada xaaladood ee aqalka dhirta lagu koriyo iyo dhulka furan.
Haddii beerashada si deg deg ah ee carrada furan, ka dibna ciidda waa ka fiican in ay doortaan wax yar acidic iyo dhexdhexaad ah. Xiddiga Acidic wuxuu horjoogayaa horumarka caadiga ah ee berry. Si looga hortago tan, dilaac carrada. Haddii dhirta cawska u muuqda, isla markiiba ka saar.
Goobta beerto waa in ay ku taallaa qorraxda tooska ah, iyada oo aan la foogin dhirta.
Tan iyo noocyada kala duwan yahay waa mid hore, ay soo degitaanka waa in la sameeyaa bilowga gugasida ugu dhakhsaha badan ee dhaxan xilliga qaboobaha.
Diiditaanka waxaa lagu fuliyaa nidaamka soo socda: 40-50x60-80 cm inta u dhaxaysa duurka. Masaafada ugu yar waa inay ahaataa 30 cm.
Waa muhiim! Dhirta strawberry waa in aan la sii dhumucda marka la beeray, maadaama uu leeyahay miraha waaweyn iyo rhizomes xoogan, si fiican u koraan oo u baahan aag aad u ballaaran ee nafaqada.
"Kama" waxaa lagu kala soocaa iyada oo aan la qabin, sidaas darteed, daryeelku waa mid sahlan oo xitaa beerta nudaha leh.
Kala duwanaan noocyada strawberry waa abaar aad u adkaysata, laakiin weli waxay u baahan tahay qoyaan joogto ah. Halkan warshadda waraabka ugu fiican ayaa tagi doonta. Under xaaladaha noocaas ah, xitaa kulaylka a strawberry ma baabbi'in doonaa.
Waa muhiim! Cagaarshow "Kama" kiiskuna waa in aan la qalajin, haddii kale waxay saameyn doontaa mugga iyo tayada dalagga.
Sidoo kale waa lagama maarmaan in la fuliyo dhirta joogtada ah iyo dabacsanaanta ciidda hareeraha baadiyaha, maadaama geedku si gaar ah u baahan yahay oksijiinka.
Waxa kale oo aad muhiim u ah in laga takhaluso dhammaan haramaha wakhtiga, taas oo hor istaagi kara in qorraxda iftiinka qoraxda duurka strawberry.
Waxaa lagu talinayaa in la fuliyo habka bacriminta isla wakhtiga sida dabacsan ee ciidda, tanina waa qodob muhiim ah oo ay tahay in si toos ah looga hortago dhammaan nafaqooyinka si buuxda ciidda. Dusha sarreeya leh digada qoyan ama Bacriminta nitrogen ma'aha mid ku habboon noocyo kala duwan. Waxay u keeni karaan cudurro fangas ah ama, ugu xun, burburiyaan duurka.
Inta ugu badan Bacriminta ku habboon noocyo kala duwan ayaa noqon doona: digada cagaarka oo kala geddisan, isku dar ah qoryo alwaax ah, cusbada iyo sulfates.
"Kama" waxay u baahan tahay mulching joogto ah, waxay noqon doontaa farsamo beeran oo waxtar leh oo joojin kara horumarinta haramaha, xajin qoyaanka ee ciidda, iyo sidoo kale kordhiyo tirada nafaqooyinka. Laga soo bilaabo xilliga ay ugxan-yari bilaabeen inay ka muuqdaan duurka, mulching waa la fulin karaa. Si aad tan u samayso, isticmaal iyo caag balaastik ah, iyo dhar mulch, iyo caws, iyo xataa dhadday.
Ma taqaanaa? Strawberry ayaa si macquul ah u dillaacday.
Si dhirta looga ilaaliyo cudurrada, waa lagama maarmaan in la buufiyo kiimikooyinka gaarka ah 3-4 jeer xilli ciyaareedkii. Daaweynta ugu horeysa waxaa la fuliyaa guga hore ka dib goosashada carrada iyadoo la isticmaalayo diyaargarawga bakooraha. Next - horraantii Abriil, marka caleemaha bilaabaan si firfircoon u koraan. La buufin muddadan, "Topsino-M", "Quadris" ama walxo kale. Labadii daaweyn ee ugu dambeeyay waxaa la sameeyaa ka dib xilliga ubax, iyadoo la isticmaalayo fungicides.
Haddii aad u baahato in aad sameysid prophylaxis geed ama la dagaallama cayayaanka, daroogooyinka soo socda ayaa kaa caawin doona: Actellic, Karbofos, Metafos iyo kuwo kale.
Haddii aadan qorshayn inaad geedo geedo ka soo jiidato strawberry, markaa waxay u baahan yihiin in la gooyo. Samee nidaamkan waa in uu ahaado guga kahor ubax iyo dayrta goosashada ka dib. Si aad tan u samayso, dooro maalin qalalan oo qalaji antennae subaxii hore ama goor dambe fiidkii. Marna ha jarin, iska jar, haddii kale waxaad waxyeeleyn kartaa jiritaanka iyo habka xididkeeda. Si caleemo qadiim ah ma qaadan nafaqooyinka ee baadiyaha, waxaad u baahan tahay si joogto ah u gooyaa.
Ubaxa strawberries "Kama" aad u nugul yahay barafka subaxdii. Si loo ilaaliyo warshadda khatarta ah ee cayayaanka, ku dabool iyaga agrofibre, spunbond ama filim. Xaaladdan, wax khafiif ah oo ku habboon hoyga.
Sidaas ayaad muujin kartaa arimaha soo socda ayaa ah:
Ripens aad u hore, ma ka baqayaan cudurada;
wax aan qabyo ahayn;
baaxad ballaaran oo codsi: labadaba isticmaalka shakhsiga iyo ujeedooyinka warshadaha;
Sababtoo ah cufnaanta iyo dabacsanaanta ee berry, strawberries "Kama" waa mid aad loogu habboon yahay diyaarinta jamsadaha iyo ilaalinta kala duwan;
miraha strawberry ayaa si fiican loogu dulqaatay gaadiidka, waxay leeyihiin tayada ilaalinta wanaagsan;
si fiican loo kaydiyaa jiilaalka.
Isla mar ahaantaana, waxaa jira tiro ka mid ah cilladaha kala duwan:
Strawberry "Kama" waa mid aad u nugul saameynta spot iyo caddaan. Si taxadar leh ula soco xaalada caleemaha, isticmaalna fungicides waqtigeeda, haddii dhibaatadaas oo kale ay weli kacday.
Xasillooni iyo caqabado gaar ah oo u dhaxeeya dhaxan subaxda.
U baahan baahida joogtada ah ee ka hortaga cayayaanka strawberry.
Strawberry "Kama" waa nooca ugu jecel bannaanka u badan. Intaa waxaa dheer in sifooyinka astaamaha wanaagsan, waxay leedahay dhadhan macaan oo gaar ah iyo dhadhan ah strawberry wanaagsan. Intaa waxaa dheer, kala duwanaanta noocaan ah waxaa si ballaaran loogu faafiyaa khabiirada khudradda, sababta oo ah strawberry waxay soo saartaa jamsi iyo ilaalin wanaagsan, hodan ku ah fitamiinada iyo nafaqooyinka.